Norway: Madaxa Nav ayaa ka mushaar badan reysulwasaaraha - NorSom News
Norway: Madaxa Nav ayaa ka mushaar badan reysulwasaaraha
Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix Foto: Pedersen, Terje
Madaxa hey´adda NAV Sigrun Vågeng ayaa xog uruurin la sameeyay lagu ogaaday inay tahay qofka ugu mushaarka badan madaxda ka shaqeysa xafiisyada dowlada Norway.
Sigrun Vågend ayaa sanadkii qaadatata mushaar dhan 1.900.000 Nok, waxuuna mushaarkeedu 219.000 Nok ka badanyahay mushaarka Reysulwasaaraha Norway, Erna Solberg.
Reysulwasaare Solberg ayaa sanadkii mushaar ahaan u qaadata 1.680.277 nok, waxaana baaritaan la sameeyay lagu ogaaday inay jiraan 14 qof oo ka shaqeeyo xafiisyada dowlada Norway, kana mushaar badan Erna Solberg.
Waa kuwan magacyada iyo jagooyinka 14-ka qof ee u shaqeeyo dowlada, kana mushaar badan Erna Solberg. J
Agaasimaha NAV Sigrun Vågeng kr 1 900 000
Xogahayaha xukuumadda Anne N. Lyftingsmo kr 1 850 800
A.W/waddooyinka Terje Moe Gustavsen kr 1 830 700
Xoghayaha Dhaqaalaha Hans Henrik Scheel kr 1 830 000
Madaxa canshuuraha Christian Holte kr 1 800 000
Hormuud Gunnar Bovim kr 1 771 500
Xeer ilaaliye guud Fredrik Sejersted kr 1 746 257
Garyaqaanka guud Busch, Tor Aksel kr 1 731 400
Xoghaye wasaaradeed Strømmen, Wegger kr 1 730 000
Xoghaye wasaaradeed Heggenes, Heidi kr 1 720 000
Agaasime guud Amund Holmsen kr 1 705 000
Madaxa Sirdoonka Benedicte Bjørnland kr 1 700 000.
Previous articleDenmark: Wiilkan soomaaliga ah oo ugu danbeyn sharcigiisa dib u helay.
Next articleUSA: Nin Soomaali ah oo loo qabtay dilka xaaskiisa.